कुलमानको कार्यकाल सकिन १८ दिन बाकी,उनलाई फेरि जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्दै अमृत गुरुङ यस्तो भन्नु हुन्छ ! – नेपाली सूर्य
August 28, 2020 August 28, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on कुलमानको कार्यकाल सकिन १८ दिन बाकी,उनलाई फेरि जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्दै अमृत गुरुङ यस्तो भन्नु हुन्छ !
अमृत गुरुङ् कुलमानको समर्थन गर्दै आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु हुन्छ –
यस्तै – कुलमानको कार्यकाल सकिन १८ दिन बाकी,उनलाई फेरि जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्दै कलाकारले लेखे स्टाट्स !
यो बहसमा नेपाली चलचित्रका कलाकारहरुले पनि साथ दिन थालेका छन् । कलाकार हरिवंश आचार्य लेख्छन्–‘यो देशमा अन्धकार ल्याउनेहरु धेरै छन्, तिनीहरुलाई खोजी खोजी हटाउनुपर्छ । उज्यालो ल्याउनेलाई सम्मान गरौं । कुलमानको उर्जाले देशको उर्जा बढ्छ ।’ हरिवंशले कुलमानको तस्वीर पोष्ट गर्दै यो स्टाटस लेखेका हुन् ।
गायक शिव परियारले पनि पुनः एकपटक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरण हाकेको हेर्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् । उनी लेख्छन्–‘म व्यक्तिगत रुपमा कुलमान घिसिङ्ले पुनः एकपटक विद्युत प्राधिकरणको हाकिम हुनु पर्दछ भनेर नेपाल सरकारसँग एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतमा जोडदार माग गर्दछु ।
अहिले देशलाई, अहिले मात्र हैन सधैभरि देशलाई उज्यालो चाहिएको छ । अब, नेपाल सरकारको निर्णय कुरेको छु हेरौं । आशा छ, उज्यालो प्रेमी हामी जस्ता तमाम नेपाली जनताको भावनाको नेपाल सरकारले सम्मान गर्नेछ ।’
यस्तै, नायिका वर्षा राउतले कुलमानको तस्वीर पोष्ट गर्दै कलाकार हरिवंश आचार्यको पोष्ट शेयर गर्दै कुलमानको समर्थन गरेकी छिन् ।सामाजिक संजालमा कुलमान फेरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको समयमा सेलिब्रिटीले समेत यसमा समर्थन जनाउन थालेका छन् ।
‘गोल अफ द सिजन’ अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई
प्रचण्ड र नेपालले अब कदम पनि अगाडी बढे संघीयता नै खारेज गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी